इमान्दार र साहसी मानिने राई को हो ? राई जातिको बारेमा केहि जानौ ! «
इमान्दार र साहसी मानिने राई को हो ? राई जातिको बारेमा केहि जानौ !
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:४३
नेपालमा १३०० बर्ष शासन गर्ने इमान्दार र साहसी मानिने राई को हो ? राई नेपालको एक जनजाति हो। यो मंगोलियन प्रजातिमा पर्दछ जो नेपालको पूर्वी पहाड्को आदिबासि हुन्, तर अहिले पूर्वी तराई लगायत काठमाडौं उपत्यका , दार्जिलिङ सिक्किम्, भुटान अनि पूर्वी भारत तिर पनि यो जातिको बसोबास् भएको पाइन्छ।
राई जातिमा अनेक थर-उपथर हुन्छ जात मात्र २९ वटा छन् उपजात कति कति । नाछिरिङ, बान्तवा , चाम्लिङ, हाङ्खिम, यामदाङ, पुमा, इसारा, ओक्छाली, बुखिम, सिवाङ, निवाङ, लोहोरुङ्, बान्तवा, कुलुङ्, थुलुङ्, दुमि, देवास, आदि राईका थरहरू हुन् रहेका छन्।
खासगरी राईहरूको मूलथलो पूर्वी पहाडको वल्लो किराँत, पल्लो किराँत र माझ किराँत भएको बताइन्छ। अर्थात संखुवासभा, ,इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग,तेह्रथुम, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ जिल्ला र धनकुटा यिनीहरूको मूलथलो हो भन्न सकिन्छ।
यसका साथै राईहरू सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, सप्तरी, मकवानपुर(राईगाउँ) लगायतका जिल्लाहरूमा छरिएर ठूलो संख्यामा बस्दै आएका छन्। बि.सं. २०४८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ५८ हजार ९ सय २२ पुरुष र २ लाख ६६ हजार ६ सय २९ गरी ५ लाख २५ हजार ५ सय ५१ उल्लेख रहेको छ। त्यसैगरी बि.सं. २०५८ सालको जनगणनाअनुसार ६ लाख ५२ हजार १ सय ५४ रहेको उल्लेख छ।
राईहरू प्राईः गरी सुँगुर तथा बंगुर पाल्ने गर्दछन्। यिनीहरू सुँगरका मासु अत्याधिक मात्रामा रुचाउछन। यिनीहरू आफ्नो खेतबारीमा मकै, कोदो, गहुँ लगायतका बालीहरू लगाउँछन्। बान्तवा थरका राईमा रक्सी, बोकाको मासु खान हुन्न भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ।
पुर्खाहरूले जंगलमा पाइने अल्लो-पाटबाट झिकेको खस्रो धागोको भांग्रा बुनेर लगाउने गर्दथे। यो जातिमा महिलाहरूले घाँटीमा मुगाको माला, चाँदीका मोहरका माला र प्रशस्त सुन लगाउने गर्दथे। अहिले यो जती हरेक क्ष्रेत्रमा अगडि देखिन्छन्। राई जातिक मनिसहरू इमानदार र शाहसि पनि मनिनछन्। राई जाती भित्र करिब ३६ भाषा छन् र यि सबै भषा बोलचालमा प्रयोग भएको पाइन्छ।
राई समुदाय मनोरञ्जन गर्ने खालका हुन्छन्। यिनीहरू गीत, नाच र वाद्यवादन असाध्यै रुचाउँछन्। ओमाडाक, बिसू तथा धुले पूजाका समयमा आठपहरिया राईहरूले सात दिनसम्म समूह समूहमा बिभाजित भई धनुकाँडबाट तीर हान्ने गर्दछन्। यसमा बाजीसमेत राखिएको हुन्छ। तीर हान्ने बेलामा राम्रा र सफा कपडाहरूमा सजिएर तारो हान्ने काममा सहभागी हुन्छन्।
कुनै कुनै वयस्क तरुनीहरूले त आफ्नो घाँटीमा लगाइराखेको हार झिकेर आफूले मन पराएको समूह वा व्यक्तिलाई तारोका रूपमा थापिदिने पनि गर्छन्। जित्नेहरू गौरवान्वित हुन्छन् र उक्त हार लाने गर्दछन्। त्यतिबेला सम्बन्धित युवतिले त्यो उकास्न एक मुरी दुई पाथी चामल, गाग्री भरि जाँड, रक्सी, एउटा सँगुर, ७ रूपैयाँदाम चढाएर मामामार्फ फिर्ता लिने प्रचलन छ। हरेक राईहरूले कम्मरमा खुकुरी भिरेकै हुन्छन्।सहरमा बस्ने राईहरूमा भने यो प्रथा भेटिदैन।
राई जातिका केटाकेटीहरूले एक अर्कामा मायाप्रीति गाँसी प्रेमबिवाह पनि गर्ने गर्दछन्। मायाप्रेमकै सिलसिलामा केही गरी केटी गर्भवती भएमा भने पनि त्यसै केटाले नै बिवाह गर्नुपर्छ । राईहरू भूतप्रेतमा विश्वास गर्छन्। राई जातिमा ‘सिये’ भन्ने भूतमाथि विश्वास गर्ने गर्दछन्। यो भूत चूल्हो, अगेँनो र राईका शव गाडिने ठाउँमा बस्छ भन्ने गर्दछन्। सियेको प्रभाव पर्नासाथ मानिसको कपाल दुख्न थाल्दछ र वान्ता पनि हुन्छ भन्दछन्।
त्यसैले कपाल दुख्न थाल्यो भने राईहरू कपाल मुठ्ठीभरि समाएर झड्का दिएर तान्ने गर्दछन्। यस्तो कार्यलाई राई भाषामा ‘टाङ ची’ भनिन्छ। वान्ता भयो भने यसले हैजाको रूप पनि लिनसक्ने विश्वास गर्दछन्। राईहरूमा खटिरा नआओस् र अंगभंग भएको केटाकेटी नजन्मून् भनेर ‘नागी’ भन्ने पूजा समेत गर्दछन्।-बिभिन्न स्रोतबाट